China Soft PVC Labels mveliso kunye nabenzi | SJJ
Iilebhile zePVC ezithambileyo zikwabizwa ngokuba ziilebhile zerabha ngabantu abathile. Uyilo lwahlukile ngazo zonke iintlobo zemibala yokudityaniswa. Ngokusetyenziswa okwahlukeneyo, ukuxhaswa kunokuba yintsimbi, iphepha, iiteyiphu zokuncamathela, iplastikhi eqinileyo, iVelcro okanye kungabikho kuxhaswa kodwa ukushiya umgca wokuthunga kwicala langaphambili lokuthunga kwiimpahla, iibhegi nakwezinye iimpahla. Iileyibhile zePVC ezithambileyo zezona zinto zibalaseleyo ukumela ukubaluleka kweempawu.
Iilebhile zePVC ezithambileyo zikwabizwa ngokuba Iileyibhile zerabhangabantu abathile. Uyilo lwahlukile ngazo zonke iintlobo zemibala yokudityaniswa. Ngokusetyenziswa okwahlukeneyo, ukuxhaswa kunokuba yintsimbi, iphepha, iiteyiphu zokuncamathela, iplastikhi eqinileyo, iVelcro okanye kungabikho kuxhaswa kodwa ukushiya umgca wokuthunga kwicala langaphambili lokuthunga kwiimpahla, iibhegi nakwezinye iimpahla. Iileyibhile zePVC ezithambileyo zezona zinto zibalaseleyo ukumela ukubaluleka kweempawu.
Ngombala ogcwaliswe kwi-2D okanye uyilo lwe-3D, iilebhile ezithambileyo zePVC zinokwenziwa kuzo zonke iintlobo zeemilo ngokuhambelana nabayili. Iinkcukacha ezincinci zinokuprintwa ngaphandle kombala ogcwalisiweyo ukwenza iilebheli zibe zezokwenyani.
MOQ: 500 iiPC
Egqithileyo Iibheji zePinki zePVC ezithambileyo
Okulandelayo: Iimagnethi eziLuhlaza zePVC
Umenzi weeleyibhile yengubo
Iilebheli zesinxibo esiqhelekileyo
Iilebheli zesiko sePVC
Iimpawu zePvc zokunxiba
Labels ezithambileyo PVC